Mibvunzo usati waita ecommerce | ECommerce nhau
Mibvunzo usati waita ecommerce
Susana Maria Urbano Mateos | | ECommerce kudzidziswa
Panguva ye denga hodha yakawanda Kuti uratidze zvigadzirwa zvako online, pane mibvunzo yakati wandei yaunofanirwa kuzvibvunza iwe.
1 Ini ndinotanga kupi kugadzira yangu online chitoro?
2 Ndeapi masisitimu ekubhadhara aunoshandisa?
3 Nzira yekuziva sei mari yekutumira?
4 Ini ndinofanira kurega vanhu vakatovatengera vataure nezve zvigadzirwa?
Ini ndinotanga kupi kugadzira yangu online chitoro?
Kana iwe usingazive kana usina nguva yekuita gadzira yako online chitoro asi iwe unoda kuitanga nekukurumidza sezvazvinogona, tinokurudzira kuti iwe ushanyire mamwe mapuratifomu ayo achange achitarisira kukodha nekuvandudza chitoro chako chepamhepo uye iwe unongofanirwa kunetsekana nezve kuisa zvigadzirwa zvako.
Ndeapi masisitimu ekubhadhara aunoshandisa?
Sarudzo yakanakisa yemakambani ese ndeye shandisa paypal, sezvo iri imwe yenzvimbo dzakachengeteka pamusika uye izvo zvinokutendera iwe kubhadhara pasina kupa wega kadhi nhamba.
Nzira yekuziva sei mari yekutumira?
Ichi chinhu chausingafanire kunetsekana nacho, nekuti makambani anotarisira kuita zvekuendesa ndeavo vane basa rekuisa iwo madhiri. Kana kambani yako ikagona, unogona kuisa kutumira kwemahara mushure me x huwandu.
Ini ndinofanira kurega vanhu vakatovatengera vataure nezve zvigadzirwa?
Kana vanhu vaine kugona kuverenga kwevamwe kuongororwa kwakanaka, vanonzwa kuzvivimba zvakanyanya nezvekutenga uye kusarudza zvavanoda nezvisiri. Nekudaro, sekunge paine ongororo dzakanaka, pane zvisina kunaka uye iwe unofanirwa kuve nesarudzo yekugona kupindura kana kudzima izvo zvisina kunaka kuchitoro chako.
Pakati pemasevhisi anopihwa nechitoro chako, unofanirwa kuve ne inoshanda yekudzorera system. Iyi sarudzo inofanirwa kupihwa iwe neako ecomerce mupiki. Iwe unofanirwa zvakare kuve nehurongwa hunotaurira mutengi iko iko kurongeka kwavo nguva dzese kana muchiitiko chekudzoka, pazvinenge zvichizoshanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » ECommerce kudzidziswa » Mibvunzo usati waita ecommerce
Matekinoroji akanganisa sei Ecommerce panguva ya2016